အများဆုံးအမြတ်အစွန်းအတွက်အကောင်းဆုံးလူမှုရေးကုန်သွယ်မှုပွဲစားများ။ ဇူလိုင်လ 2022
2 ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ 2022 ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ကိုလူမှုကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်လေ့လာပါ။
လူမှုကုန်သွယ်မှုသည်အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်တွင်ဖြစ်ရပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်လူမှုကုန်သွယ်ရေးအင်္ဂါရပ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အွန်လိုင်းပွဲစားများကသင့်ကိုအခြားကုန်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဗဟုသုတများကိုတိုးတက်ရန်နှင့်ခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
အချို့သောလူမှုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းများသည်သင့်ကိုအခြားအသုံးပြုသူများ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုကူးယူရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ဆင့်သွားနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုမတင်စရာမလိုဘဲ passive ဝင်ငွေရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
လူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်လူမှုရေးကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှု (၂) ကုန်သွယ်ရေး (၂၀၀၀) လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးကုန်သွယ်မှုအမှန်တကယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ဆိုသည့်အချက်နှင့်အချောကိုဖုံးအုပ်ရုံသာမကဘဲစျေးကွက်တွင်လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသောအကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းများကိုလည်းဆွေးနွေးကြသည်။
မှတ်စု: လူမှုကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုမှ အဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းတို့ပြောနေကြသည်ကို သိလိုသော်လည်း ဆားအနည်းငယ်ဖြင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အကြံဉာဏ်ကို အမြဲယူသင့်သည်။ ယင်းအစား၊ သင်သည် ရေရှည်အကျိုးအမြတ်များရရှိရန် အတည်ပြုနိုင်သော လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိသည့် အဖွဲ့ဝင်များအပေါ် အာရုံစိုက်သင့်သည်။
Social Trading ဆိုတာဘာလဲ။
နာမတော်ကိုအမှီပြု။ အကြံပြုအဖြစ်, လူမှုရေးကုန်သွယ်မှုတစ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် ထိုအရာသည်သင့်အားအခြား site ၏အသင်းဝင်များနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ဤအချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တူညီသောပွဲစားပလက်ဖောင်းရှိအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်ကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များကိုတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အများပြည်သူသိရှိအောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်ဆွေးနွေးရန်ဆိုလိုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းကကုန်သွယ်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပါစို့ ဆီ။ ပွဲစား၏ရေနံအပိုင်းကို ဦး တည်ခြင်းအားဖြင့်အခြားအဖွဲ့ဝင်များကစျေးကွက်များမည်သို့သွားမည်ထင်သလဲဟူသောအတွေးများနှင့်ရှုထောင့်များကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည်ရေနံစျေးကွက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကိုပေးရန်သင်ဆုံးဖြတ်ကောင်းဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အခြားအဖွဲ့ဝင်များမှပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။
အရေးကြီးသည်မှာလူမှုကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည်သင့်အားကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များကိုဆွေးနွေးရန်ခွင့်ပြုသည့်အွန်လိုင်းဖိုရမ်များသာမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သူတို့သည်သောင်းနှင့်ချီသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်၊ ရောင်းဝယ်ရန်နှင့်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အပြည့်အဝအကျိုးဆောင်သည့်အရစ်ကျစင်မြင့်များဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤသည်မှာသင်၏ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုဖြည့်စွက်သည့်လူမှုရေးကုန်သွယ်ရေးရှုထောင့်နှင့်အတူ၎င်းသည်ပလက်ဖောင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
လူမှုရေးကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွင်သတိပြုရမည့်အချက်မှာအချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်မိတ္တူကူးခြင်းကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ ဤနေရာသည်အခြားအသုံးပြုသူများ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုထင်ဟပ်စေသည့်နေရာဖြစ်သည်။ သင်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည်ကိုသင်ရွေးချယ်ရပြီးအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုတွင်မည်သည့်လောင်းကြေးများကိုသင်အပ်နှံရမည်ကိုသင်ရွေးချယ်ရမည်။
Copy Trading မှတစ်ဆင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုထင်ဟပ်ပြပါ
Social trading sites များသည် debit / credit card နှင့် e-wallet payment ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံး - အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းလူမှုကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်၏ကျယ်ပြန့်သောရည်ရွယ်ချက်သည်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူတူပင် - သင်ငွေရှာရန်ရှိနေသည်။ တနည်းအားဖြင့်အွန်လိုင်းပွဲစားနှင့်အကောင့်ဖွင့်ရန်၊ ID အချို့တင်ရန်၊ ရန်ပုံငွေထည့်ရန်နှင့်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို DIY အခြေခံဖြင့်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
ထိုအရာများဖြင့်ဆိုပါကသင်သည်စင်မြင့်၏လူမှုအသွင်အပြင်ကိုရရှိလိမ့်မည်။ ဤအရာသည်သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောကုန်သည်တစ် ဦး အဖြစ်ပုံသွင်းပြီးသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
လူမှုရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကိုလှည့်စားရန်အလွယ်ဆုံးနည်းမှာ Facebook ကဲ့သို့သောရိုးရာလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းသင်ပလက်ဖောင်း၏သီးသန့် messenger လုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်စကားမပြောလျှင်အားလုံးသည်လူသိရှင်ကြားဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်တစ်စုံတစ်ယောက်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို နှိပ်၍ ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနိုင်သည့်စွမ်းရည်ပါ ၀ င်သည်။
သင်၏လူမှုရေးကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတွင်၊ သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုလျှို့ဝှက်ထားရန်သင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိပါက၊ ဆိုက်၏အခြားအဖွဲ့ဝင်များကသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့မြင်ရမည်။ အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များသည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ယူပြီးရောင်းချနေသည်ကိုလေ့လာရန်ဤသည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်အနေနှင့်သင်အတွက်ကောင်းပါသည်။
သင်စိတ် ၀ င်စားမည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားများတွင် -
trader ၏အသုံးပြုသူအမည် (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မရှိပါ)
တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချိန်ယူလေ့လာခြင်းဖြင့်ကုန်သည်သည်မည်မျှအောင်မြင်သည်ကိုသင်အကဲဖြတ်ရလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာသည်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်များဟုခေါ်သောကုန်ကြမ်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အဖြစ်မှန်ကဒီ 'ကျွမ်းကျင်သူ' အများစုဟာတကယ်တော့ကျွမ်းကျင်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ သာမာန်အားဖြင့်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာဂုရုများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို Instagram နှင့် YouTube တွင်အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်ရောင်းချခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်အောင်မြင်မှုမရရှိသကဲ့သို့အောင်မြင်မှုမရကြောင်းသိရှိရန်သာဖြစ်သည်။
ကောင်းသောသတင်းမှာလူမှုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည် ၁၀၀% ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ပလက်ဖောင်းသို့ဝင်ရောက်စဉ်အသုံးပြုသူမှပြုလုပ်ခဲ့သောကုန်သွယ်မှုတိုင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။ အချက်အလက်များကိုအစစ်အမှန်ကုန်သွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အခြေခံထားသောကြောင့်ဤအချက်အလက်များကိုကုန်သည်မှ ပြင်ဆင်၍ မရ၊ ထို့ကြောင့်အချက်အလက်များကိုသင်ဖတ်ရှုရလွယ်ကူသောသတင်းများအဖြစ် ခွဲ၍ ချိုးဖျက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်သည်မည်မျှအောင်မြင်သည်ကိုသင်တိုင်းတာနိုင်သည်။
သင်ကြည့်ရှုလိုသည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ရှိပြီးသည့်နောက်၎င်းဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မဟုတ်တွစ်တာတို့ကဲ့သို့သင်မိတ်ဆွေများစာရင်းထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ ပြီးတဲ့နောက်သင်ပလက်ဖောင်းမှာသူတို့လုပ်သမျှအားလုံးကို tab တွေသိမ်းထားနိုင်တယ်။ ၎င်းတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအရောင်းအ ၀ ယ်များအပြင်အများပြည်သူဖိုရမ်တွင်သူတို့တင်သောမှတ်ချက်များလည်းပါ ၀ င်သည်။
လူမှုကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည်တိကျသောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများအပေါ်ထားရှိသည့်ခံစားချက်များကိုတိုင်းတာရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ eToro ကိုဥပမာအနေနှင့်ကြည့်ပါ။ အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းသည်သင့်ငွေအပေါ်မည်သည့်နေရာတွင် ၀ င်ရောက်နေသည်ကိုဖော်ပြသည့်ရာခိုင်နှုန်းကိုဖော်ပြပေးသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်အသုံးဝင်သည်၊ အထူးသဖြင့် eToro သည်ကုန်သည် ၁၂ သန်းကျော်နေထိုင်သည်ဟုသင်စဉ်းစားသောအခါ။
ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင်မင်းကရွှေတိုတိုရဲ့ ဦး တည်ချက်ကိုအကဲဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပါစို့။ အကယ်၍ လူမှုကုန်သွယ်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှငွေ၏ ၉၇% ကိုရောင်းရန်မှာထားကြောင်းဖော်ပြပါက၊ ရှေ အလွန်အမင်း bearish ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရာနှင့်အတူပလက်ဖောင်းရှိဆန့်ကျင်ဖက်များသည် ၀ ယ်ယူမှုအမှာစာပေးခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်ကိုဆန့်ကျင်ဖွယ်ရှိသည်။
လူမှုကုန်သွယ်ရေးဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် သင်တွေ့သော အများသူငှာ ဆွေးနွေးမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်နှစ်သက်ပါသည်။ ဒါက လူတွေက စျေးကွက်ကို ဘယ်နည်းနဲ့သွားမလဲဆိုတာကို ရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ ပလက်ဖောင်းမှာ တခြားကုန်သည်တွေနဲ့ စကားပြောနိုင်စေတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် ကုန်သွယ်မှုကို စိတ်ဝင်စားသည်ဟု ဆိုကြပါစို့ Apple လက်ကျန်.
သက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးစာမျက်နှာသို့ ဦး တည်သွားခြင်းဖြင့်ဆွေးနွေးမှုများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကမှတ်ချက်တစ်ခုတင်ပြီးဆွေးနွေးမှုကိုစတင်မည်ဆိုပါကအခြားသူများသည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုစွန့်ခွာပြီးပြောင်းလဲခြင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်မည်ဆိုပါက၎င်းသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှချည်မျှင်နှင့်မတူပါ။
သင်မကြာခဏတွေ့ရမည့်အချက်မှာအတွေ့အကြုံရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်၎င်းတို့၏ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု၏အခြေခံအကြောင်းအရင်းများ - ၎င်းတို့သည်မည်သည့်လမ်းဖြင့်သွားမည်ကိုသူတို့ထင်မြင်သည့်အရာနှင့်အလွန်အမင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုချန်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာသင်သည်လူများ၏အခြေခံနှင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွေ့ရှိချက်များကိုမကြာခဏဆွေးနွေးခြင်းကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
အထက်ဖော်ပြပါလက္ခဏာများသည်ကြီးမားသောလူမှုရေးကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၏ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးသည် 'ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကူးယူရေး' စွမ်းရည်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ငြင်းခုန်လိမ့်မည်။ မဟုတ်ရင် 'automated trading' (သို့) 'mirror trading' (သို့) မှန်အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းလို့ရည်ညွှန်းပြီး၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကသင့်ကိုအခြားသုံးစွဲသူ၏ကုန်သွယ်မှုကိုကူးယူနိုင်တယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့၊ ထို site ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး သည်အမေရိကန်စတော့ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။ သင်တတ်နိုင်သည့်ပမာဏနှင့်အချိုးညီစွာ၎င်းတို့နှင့်တူသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုအတိအကျပြုလုပ်လိုသည်။ သင်သည်၎င်းကိုလူမှုရေး ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များရှိခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်လုပ်နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်အပိုဆုကြေးမပေးပါ။
သင်ကူးယူလိုသောကုန်သည်တစ် ဦး ကိုရှာပါ
သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုဆိပ်ကမ်းသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုရှာရန်ဖြစ်သည်။ eToro သည်လူမှုရေးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည့်ယခုအခါကုန်သည် ၁၂ သန်းကျော်ကိုလက်ခံထားသောကြောင့်သင်အလေးအနက်သုတေသနပြုရန်လိုလိမ့်မည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာသင်သည်စစ်ထုတ်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ သင်၏ရှာဖွေမှုကိုလွယ်ကူစွာကျဉ်းမြောင်းနိုင်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုများ အသုံးပြုသူသည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအထူးအလေးထားသည်ကိုကြည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့သည်စတော့များကိုသာဝယ်ယူကြသလောသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောချဉ်းကပ်နည်းကိုကြိုက်လား။
ပလက်ဖောင်းမှာအချိန် - နှစ်ပေါင်းများစွာတည်မြဲသောအကျိုးအမြတ်များရရှိခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများရှိသည့်ကုန်သည်များကိုသင်အာရုံစိုက်ချင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်သည်သူတို့၏ပထမလကြိုးစားမှုတွင်ဂဏန်းနှစ်လုံးအမြတ်များရရှိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းသည်သင်ကူးယူသင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အဲဒီအစားနှစ်ပေါင်းများစွာ site ပေါ်တွင်တက်ကြွခဲ့ကုန်သည်များကိုရွေးချယ်ပါ။
အကျိုးအမြတ်များ ကုန်သည်သည်မည်မျှအောင်မြင်ခဲ့သည်ကိုလည်းသင်အကဲဖြတ်ရန်လိုသည်။ ၎င်းကိုတိုင်းတာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာလစဉ်ဇယားများကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ပြီးသည့်နောက်ပြက္ခဒိန်လတစ်လအတွင်းကုန်သည်မှမည်သည့်အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုသင်တွေ့မြင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ 'အစိမ်းရောင်' လများများလေလေဖြစ်သည်။
အန္တရာယ်: eToro ကဲ့သို့လူမှုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အန္တရာယ်အဆင့်သတ်မှတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီပြုလုပ်သည့်ကုန်သွယ်မှုအမျိုးအစားများ၊ ၄ င်းတို့၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေနှင့်သက်ဆိုင်သောအစုရှယ်ယာပမာဏများအပေါ် အခြေခံ၍ အလိုအလျောက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သြဇာလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစွန့်စားမှုအဆင့်ကိုသာအားမထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ယင်းအစားအစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောမက်ထရစ်များကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်ကုန်သည်များ၏အန္တရာယ်ကိုအကဲဖြတ်ပါ။
မိတ္တူကူးကုန်သည်များအရေအတွက် - မကြာခဏသတိမထားမိဘဲ၊ ဆိုဒ်ရှိအသုံးပြုသူမည်မျှရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည်ကိုကြည့်ရှုရန်လည်းအသုံးဝင်သည်။ သိပ္ပံအတိအကျမဟုတ်သော်လည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လိုက်နာကျင့်သုံးသောကုန်သည်များသည်အကျိုးအမြတ်များတသမတ်တည်းဖြစ်သောကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုသို့ပြုကြသည်။ ၎င်းကကုန်သည်ကိုထပ်မံဖိအားပေးသည်။ သူတို့နောက်လိုက်လိုက်လေလေ၊ သူတို့အတွက်ပိုက်ဆံပိုများလေဖြစ်သည်။
သင်ကူးယူလိုသည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ရှိပြီးသည်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သင်လုပ်လိုသည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ လူမှုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်အချိုးကျအခြေခံသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏စုစုပေါင်းရှယ်ယာသည်သင်ကူးယူနေသည့်အစုရှယ်ယာနှင့်တူလိမ့်မည်။
မင်းတို့မှာသူတို့ရဲ့အစုရှယ်ယာထဲမှာ ၅ ခုရှိတဲ့ကုန်သည်တစ်ယောက်ကိုသင်ကူးယူချင်တယ်ဆိုပါစို့
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားရန်၊ ကုန်သွယ်မှုသည်စတော့ရှယ်ယာ ၄ ခုအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀ နှင့်စတော့ရှယ်ယာတစ်လုံးအတွက်ဒေါ်လာ ၆၀၀ ခွဲဝေပေးခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောလိမ့်မည်။
ဤသည်စုစုပေါင်းအစုစုကို $ 1,000 ကြာပါသည်
သို့သော်သင်ကဒေါ်လာ ၁၀၀ သာလောင်းကြေးငွေကိုသာလိုချင်သည် - ၎င်းသည်အစုရှယ်ယာတန်ဖိုး၏ ၁၀% ရှိသည်
ထို့ကြောင့်သင်၏အစုစုသည်အစုရှယ်ယာ ၄ ခုတွင်ရှယ်ယာ ၄ ခုနှင့်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၆၀ ရှိသည်။
အပေါ်ကပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအစုစုတစ်ခုလုံးကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းနှင့်ကူးယူရန်သင်ရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သင်စုစုပေါင်းမည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်ကိုလည်းသင်ရွေးချယ်ရလိမ့်မည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည့်လူနှင့်အချိုးအစားနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်သင်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်လက်ရှိအစုစုကိုကူးယူရန်မလိုပါ။ အဲဒီအစား, သင်အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးကိုကူးယူဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်, သင်နှစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အခြားလူမှုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာသုံးစွဲသူနောက်လိုက်ခြင်းဖြင့်သင်ရရှိသောမည်သည့်အကျိုးအမြတ်သည်သင်ကူးယူနေသူကိုထင်ဟပ်ပြလိမ့်မည်။ ဥပမာ၊ ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လတွင်ကုန်သည်သည်အမြတ် ၄% ရရှိသည်ဟုဆိုပါစို့။
ကုန်သည်ပမာဏမည်မျှပင်ရှိစေကာမူအမြတ် ၄% သည်အရွယ်အစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည် သင့်ရဲ့ အစုစု။ အထက်ဖော်ပြပါဥပမာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်သင်၏ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကုန်သွယ်မှုအစုရှယ်ယာသည်အမြတ် ၄ ဒေါ်လာရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
သို့သော်အစုရှယ်ယာများသို့မဟုတ်ကူပွန်ငွေပေးချေမှုပုံစံများမှသတ်မှတ်ထားသော ၀ င်ငွေကိုမပါ ၀ င်လျှင်သင်ကုန်သွယ်မှုကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့လျှင်သင်၏အမြတ်ကိုသာနားလည်လိမ့်မည်။ မိတ္တူကူးကုန်သည်များကိုယ်တိုင်ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကသင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
eToro ကဲ့သို့လူမှုကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာကမင်းမှာထောင်ပေါင်းများစွာသောအမြတ်အစွန်းကုန်သည်တွေကူးယူရလိမ့်မယ်။
၎င်းကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ဤအချက်သည်သင့်အားများစွာကွဲပြားခြားနားသောမိတ္တူကုန်သည်များဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုးရွားတဲ့လတစ်လကုန်သည်တစ်ယောက်ဆီကနေသင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကိုသင်ရပ်တည်လိမ့်မယ်။
အလိုအလျောက်လူမှုကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာတွင်ပါ ၀ င်မှု၏အလွန်အရေးကြီးသောလက္ခဏာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးဆင်းမှုတစ်ခုလုံးသည် passive ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်စုံတစ်ရာကိုလုပ်ဆောင်စရာမလိုဘဲလတိုင်းကုန်ဆုံးချိန်၌ ၀ င်ငွေရရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းအစားသင်လုပ်ရန်မှာမည်သည့်ကုန်သည်များသင်ကူးယူလိုသည်ကိုရွေးချယ်ပြီးလူမှုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်ကျန်များကိုဂရုစိုက်သည်။
လူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုဖြစ်လာခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်တစ် ဦး ၏ရှုထောင့်မှအာရုံစိုက်နေသော်လည်းအဆင့်မြင့်ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်ရှိသူများအတွက်၎င်းတွင်ဘာရှိသနည်း။ တကယ်လို့သင်ပိုကျယ်ပြန်တဲ့စျေးကွက်ထက်သာလွန်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Secret Sauce ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလူတိုင်းသိစေချင်ပါသလား။
ကောင်းပြီ, ဝါရင့်ကုန်သည်များကသူတို့အခြားလူများမိမိတို့ကုန်သွယ်မှုကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည့်အခါအပိုဆောင်းဝင်ငွေစီးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်လူမှုရေးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်အချို့သောမှတ်တိုင်များပြည့်မီသည့်အခါကုန်သည်ကိုကော်မရှင်ပေးရမည်။ ၎င်းသည်ကုန်သည်ကိုကူးယူသောအသုံးပြုသူနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏအပေါ်အဓိကထားသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကုန်သည်တွင်ကူးယူထားသောလူ ၁၀၀ ရှိပြီးအစုစုတစ်ခုစီသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစုစုပေါင်း AUM သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လူမှုကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်ရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှကော်မရှင် ၁% ပေးဆောင်ပါကအပိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရရှိသည်။
အရေးကြီးသည်မှာကုန်သည်သည်ဘာပဲလုပ်လုပ်လုပ်ရန်အပို ၀ င်ငွေရနေခြင်းကြောင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်ပါတီအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမည့်အခြေအနေဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်လူမှုရေးအရောင်းအဝယ်၏အသံကိုကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်းမည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုမသိသော်လည်း၊ အောက်တွင်သင့်အားငွေရှာရန်အခွင့်အလမ်းအကောင်းဆုံးကိုမည်သို့ပေးရမည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အကြံပေးချက်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အချို့သော parameter များသတ်မှတ်မည်
အမြတ်အစွန်းကုန်သည်များကိုကူးရန်ရှာသောအခါတွင်သင်သည်အချို့သောသတ်မှတ်ချက်များထားရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သည်နှင့်တွေ့ဆုံရန်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုအချိန်ယူစဉ်းစားသင့်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကောင်းသောအစမှတ်မှာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကိုသာစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။
ကုန်သည်၏ရလာဒ်များမှာကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်ရန်သင်သေချာစေရန်နှစ်နှစ်အထိသင်လုပ်လိုပေမည်။ သင်ကြည့်ချင်သောနောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာကုန်သည်၏အန္တရာယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သင်အနိမ့်မှအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုသင်စဉ်းစားနိုင်သော်လည်း၊ သင်ကအန္တရာယ်မြင့်မားသောတံခါးခုံအောက်တွင်ရှိသောသူများနှင့်ဝေးဝေးနေလိုပေမည်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်ထိတွေ့မှုရလိုသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသုံးပြုသူသည် Bitcoin နှင့်ကုန်သွယ်မှုနှစ်ဆအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် Ethereum လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း၊ သင် cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အဆင်မပြေလျှင်၊ မထားဘူး
ထို့အပြင်အချို့သည် ၀ င်ငွေရစေသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းသာဖြစ်ခဲ့လျှင် ၀ င်ငွေတိုးပွားလာသောပိုင်ဆိုင်မှုများရှိသည့်လူမှုကုန်သည်များကိုအာရုံစိုက်ပါ။
အကွိမျမြားစှာကုန်သည်များတစ်လျှောက်ကွဲပြား နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများ
မျိုးစုံမျိုးကွဲများအစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တိုတိုတုတ်တုတ်ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်မည်မျှအရေးကြီးသည်ကိုလုံလောက်စွာအလေးပေး။ မရပါ။ တကယ်တော့၊ ကုန်သည်မျိုးစုံအတွက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားရန်သင်အားအကောင်းဆုံးအကြံပေးသည် နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်း။ ယခင်နှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးပြုသူများစွာ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုကူးယူသင့်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်၊ သုံးစွဲသူတစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးသည် ဆိုးရွားသောလတစ်ခုရှိလျှင် - သို့သော် ကျန်သူများသည် အမြတ်ငွေဖြင့် ပြီးသွားပါက သင်သည် စိမ်းလန်းနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် - မတူညီသောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားများကို အထူးပြုသော ကုန်သည်များကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင်၏ ကွဲပြားခြင်းဆိုင်ရာ ဗျူဟာကို ပိုမိုချဲ့ထွင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် စတော့ရှယ်ယာများ၊ ETFsအစိုးရငွေချေးစာချုပ်များနှင့် ကုန်စည်.
မိတ္တူကူးကုန်သည်များ၏အလေးချိန်ပမာဏကိုဖန်တီးရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့ကုန်သည်များသည် ၇၀/၂၀၁၀ ချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြု၍ စွန့်စားရမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့အစုစု၏ 70% ကိုအန္တရာယ်နိမ့်ရမှတ်ကုန်သည်များ, 20% အလတ်စားနှင့် 10% မြင့်မားသောကုန်သည်များအပေါ်အခြေခံပြီးနေရာဖြစ်သည်။
လူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ထိုသို့သောချဉ်းကပ်နည်းကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်၊ သင့်အနေဖြင့်စွန့်စားမှုနည်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်သင်၏ငွေအများစုကိုရရှိသည်။ သို့သော်၊ မြင့်မားသောစွန့်စားမှုရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလည်းသင်ရရှိသောအကျိုးအမြတ်အပေါ် မူတည်၍ ငွေအနည်းငယ်ခွဲဝေထားပါသည်။
သင်တစ်ချိန်တည်းမှာကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်လူမှုရေးကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်အသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
သင်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်အရေးကြီးဆုံးမက်ထရစ်မှာလူမှုကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်အားလိုင်စင်ချထားခြင်းရှိ / မရှိဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်သင်သည်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာငွေကိုစင်မြင့်ပေါ်တွင်ငွေသွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အလွှာတစ်ကိုယ်တည်းဖြင့်ကာကွယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ eToro ၏ထိပ်တန်းလူမှုကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်ကိုယူကေ၊ သြစတြေးလျနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တို့တွင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သူများကလိုင်စင်ချထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ငွေသည်အမြဲတမ်းလုံခြုံသည်။
သင်အကြိုက်ဆုံးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုထောက်ပံ့သောလူမှုရေးကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်ဒက်ဘစ်၊ အကြွေးဝယ်ကဒ်၊ e-wallet သို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် sign up မလုပ်မီစစ်ဆေးပါ။
သင်သည်ကူးယူခြင်းဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကိုခွင့်ပြုလိုသောကြောင့်လူမှုရေးကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်ပါကစင်မြင့်ပေါ်တွင် ၁၀၀% ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်သင်ကူးယူရန်စဉ်းစားနေသည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသင်ပြန်လည်စစ်ဆေးသည့်အခါ၎င်းတို့သည်သူတို့ပြုလုပ်ဖူးသမျှကုန်သွယ်မှုတိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ရမည်။
၁၀၀% ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းအပြင်စာရင်းဇယားများကိုလွယ်ကူစွာဖတ်ရှုနိုင်သောလူမှုရေးကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်ကိုလည်းသင်ရွေးချယ်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းများသည်ကုန်သွယ်မှုရလဒ်များကိုတစ်လပြီးတစ်လပြိုကွဲစေလိမ့်မည်။ ထိုလမ်း, သင်မည်မျှတသမတ်တည်းကြည့်ရှုရ မိတ္တူ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ကုန်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
မမေ့ပါနှင့်၊ သင်ကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်တော့မည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်ငွေကြေးကိရိယာများကိုသင်ရရှိနိုင်ကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့သင်ဟာများပြားလှတဲ့ကော်ပီကုန်သည်တွေရဲ့အစုစုကိုဖန်တီးချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင်တတ်နိုင်သမျှပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုများများရချင်တယ်။
ကုန်သွယ်ခများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ရုံသာမကကူးယူရောင်းဝယ်မှုအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားအခကြေးငွေယူနိုင်သည်။ အခြားအသုံးပြုသူများ၏ကုန်သွယ်မှုကိုထင်ဟပ်ရန်အတွက် eToro တွင်သင်သည်မည်သည့်အခကြေးငွေကိုမပေးချေပါ။ သို့သော်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကော်ပီကူးသည့်အခါလူမှုရေးကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များစွာကသင့်အားကော်မရှင်တခုခုကောက်ခံလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။
2022 ၏အကောင်းဆုံးလူမှုရေးကုန်သွယ်မှု site ကို
လူမှုရေးအရောင်းအဝယ်အသံလိုမျိုး၊ အခုအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ချင်သလား။ သို့ဆိုလျှင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းအဆင့်ပလက်ဖောင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်စဉ်သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလက်လီအရောင်းအဝယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာကိုမုန်တိုင်းထန်စေခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကအွန်လိုင်းပွဲစားများသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ Facebook နှင့် Twitter တို့ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များနှင့်တူညီသောကျောင်းအုပ်များနောက်တွင်လိုက်နေသောပလက်ဖောင်းများစွာနှင့်အတူ ထိုအချိန်မှစ၍ အခြေအနေများစွာပြောင်းလဲသွားသည်။
သင်ဟာလူသစ်ကုန်သည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဗဟုသုတများစွာရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒါဟာကောင်းပါတယ်။ အလားတူစွာသင်သည်အခြားအသုံးပြုသူများ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုထင်ဟပ်ပြခြင်းဖြင့် passive ဝင်ငွေရရှိရန်အခွင့်အရေးလည်းရရှိသည်။ ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုမစွန့်စားမီကုန်သည်တစ် ဦး အပေါ်အိမ်စာအချို့လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ဆုံးသင်လူမှုရေးကုန်သွယ်မှုသည်မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏နက်ရှိုင်းသောလမ်းညွှန်ကသင့်အားသင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်သင့်ကိုလက်နက်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းအဆင့်လူမှုရေးကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်သော eToro ကိုလည်းသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပြခဲ့သည်။ ပွဲစားနှင့်ငွေစာရင်းဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်လူမှုရေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
အလွန်နီးကပ်စွာဆက်စပ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရာနှစ်ခုကိုရည်ညွှန်းသည်။ လူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်ကိစ္စတွင်ဤသည်သည်အခြားကုန်သည်များနှင့်အများဆိုင်ပုံစံဖြင့်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည် - သင် Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာ site တစ်ခုတွင်ပြုလုပ်သကဲ့သို့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုသည်လူမှုရေးအရောင်းအဝယ်၏အောက်တွင်ကျရောက်နေသောအခြားအသုံးပြုသူများ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုထင်ဟပ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။
eToro သည်ယခုအချိန်တွင်အာကာသအတွင်းအကောင်းဆုံးလူမှုရေးကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကူးယူကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြိုင်ဘက်များမလာမချင်း eToro သည်နေရာကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်လွှမ်းမိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။
မိတ္တူကူးသည့်ကုန်သည်ကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များများစွာရှိသည်။ ၎င်းတွင်ကုန်သည်ရောင်းသူ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရှိနေသည့်အချိန်၊ သူတို့၏တစ်လပြီးတစ်လအမြတ်အစွန်းနှင့်သူတို့၏စွန့်စားမှုအဆင့်တို့ပါဝင်သည်။
ဖြစ်ရပ်များ၏အများစုမှာမျှမ။ မမေ့ပါနှင့်၊ လူမှုကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည်အွန်လိုင်းပွဲစားများဖြစ်နေဆဲပင်။ ပြီးတော့အွန်လိုင်းပွဲစားတွေကဘယ်လိုငွေရှာကြသလဲ။ သင်ကုန်သွယ်သည့်အခါ! ထို့ကြောင့်သင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးငွေမသွင်းဘဲငွေသွင်းနိုင်သည်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်ဟုတ်ကဲ့။ သငျသညျပိုင်ဆိုင်မှု -based သြဇာကန့်သတ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါသို့သော်သို့သော်ဤသည်လှည်ရနိုင်။ ဥပမာ ESMA သည်အစုရှယ်ယာများနှင့် cryptocurrencies အပေါ် ၅: ၁ နှင့် ၂: ၁ အထိသြဇာသက်ရောက်သည်။ ထို့ကြောင့်ယင်းကိုသတိရပါ။
လူမှုကုန်သွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏ privacy အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်သလား
လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ အခြားကုန်သည်များကိုသက်ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်းမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစား၊ သင်ကသူတို့အသုံးပြုသူအမည်ကိုသာတွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကိုကူးယူရန် eToro သည်အခကြေးငွေယူပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ eToro တွင်ကူးယူရောင်းဝယ်မှုသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။